कोरियाली शिखर सम्म्मेलन:यी दुई देशको दिर्घकालिन शान्तीको सम्भब होला त ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कोरियाली शिखर सम्म्मेलन:यी दुई देशको दिर्घकालिन शान्तीको सम्भब होला त ?
शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१० मा प्रकाशित !
काठमाडौँ – कोरियाली प्रायदीपमा सन् १९५० को जुन २५ देखि सन् १९५३ जुलाई २७ सम्म चलेको युद्धले लामो समयसम्म कोरियाली जनतालाई दुःख, त्रास र अन्यौलमा बाँच्न बाध्य पा¥यो । कोरियाली युद्धका कारण छुट्टिएका परिवारबीच अझै पुनर्मिलन हुनसकेको छैन ।
उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रिले न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालय बाहिर संवाददातासँग यसको प्रतिक्रियामा भनेका थिए,, “एउटा भनाइ छ नि कुकुर भुक्दै गर्दा पनि ‘परेड’ चलिरहन्छ । यदि ट्रम्पले हामीलाई कुकुरको भुकाइमार्फत अचम्मित पार्न खोजेका भए सपना देख्दैहुनुहुन्छ ।”
समाचारमा आएअनुसार उत्तर कोरियाली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच पनि आगामी मे महिनाको अन्तिमतिर भेटवार्ता हुने सम्भावना छ ।
यद्यपि बैठक कहाँ र कुन मितिमा गर्ने निश्चित भने भएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुई दिन पहिले गरेको ट्वीटमा वार्ता निकट समयमा हुनसक्ने कुरालाई सङ्केत गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच उत्तर कोरियाले गत वर्ष एक पछि अर्को गर्दै आणविक हतियार, तथा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षणका कारण विश्व समुदायलाई त्रास फैलिएका समय स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन चीनले गरेको कूटनीतिक प्रयासको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार प्रसंशा गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको कोरियाली प्रायदीपमा शान्ति स्थापनार्थ खेलेको पहलको खुलेर प्रसंशा गर्दै आफ्नो ट्वीटर पेजमा लेखेका छन् , “मेरो असल साथी तथा चीनका राष्ट्रपति सीले खासगरी कोरियाली सीमा विवाद समाधानका लागि गरेको प्रयासलाई हामी कसैले नविर्सौं । उहाँविना वार्ता प्रयास लामो र कठीन हुने थियो ।”
दुई कोरियाका शीर्ष नेताबीच शिखर बैठक भएकोमा विभिन्न देशले स्वागत गरेका छन् ।
अमेरिकाले शिखर बैठकले दुई कोरियाली जनताको हितमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनको शुक्रबारको भेटवार्तालाई “ऐतिहासिक र सुखद्” भनेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: महिनावारी पर सार्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ८ प्राकृतिक तरिका
NEXT POST Next post: आजको दिन तपाईको लागि कस्तो छ हेर्नुस, आजको राशिफल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १६:१०